Kismaayo News » Shareecada Xukuumad Ku Sheega: Bad iyo Bariba Waa beec:WQ Cali-Daahir X Muxammad
Shareecada Xukuumad Ku Sheega: Bad iyo Bariba Waa beec:WQ Cali-Daahir X Muxammad
Haddii uu ogaan lahaa in shacabku aan la marsiin Karin wax aan shareecada islaamka oo barax la’ ka ahayn, lama soo shir tageen shareeco islaam baan wadaa ee daaguudka uu doonayo inuu wax ku xukumo ayuu caddaysan lahaa. Hallagu raaco ama hallagu diido sida kuwii ka horeeyayba ay u caddaysteen dagaalka ay kula jiraan islaamka.
Balse kolkii ay u caddaatay in shacabkani badankii uu yahay shacab ay qabyaaladi dillootay diin, dad iyo dalna aan dan ka lahayn marka loo bar-bar dhigo qabiilka oo qofka soomaaliga ahi reerkiisu gar iyo gar daraba uu is garab taago waana sida hadda saaxada taala ee ah: Horay U Soco Wax Kuu Sacbiya Waayi Meyside! Waana sidii ay ahaan jireen carabta xilligii jaahiliyadda oo ay ku gabyi jireen:
Kol haddii ay caqliyaddii shacabku intaa aysan ka badnayn waxaa u sahlanaaday waxa xukuumad lagu sheegay inay yaraysato shacabkeeda.
Waxaan shaki lahayn in xukuumad ku sheegtani ay qaadatay kaartadii fircoon taas oo ahayd kolkii uu fircoon LC uu caqliyaddooda iyo sida ay u fekerayaan uu darsay inay yhiin fasaqo iyo fajaro baa u suurto gelisay inuu yaraysto uuna kasoo qaado wax aan qiimo lahayn kadibna uu dullaystay ilaa markii danbe uu sheegto ilaahnimo iyagoo soo taagan.
Sh C/Raxmaan Bin Naasir Al-Sacdi Ayaa isaguna wuxuu ku fasiray Aayadan iyadoo kooban
Shardi kasta oo aan laga helin kitaabka Alle waa uu buray / oo waa baadil oo wax ka jiraa ma laha / haba ahaado boqol shardi.
Waxaase nasiib daro ah in dadka heshiisyada galaya aysan ama hogaamiye lagu sheego badankood aysan diin waxba ka garanaynin. Waana midda uu Rasuulku SCWW uu kasii waramay umadda aakhira-zamaanka waxa hogaamin doono inay ahaan doonaan kuwo wax ma garato ah.
Aaway ciidamadii gaalada wadanka waan ka saaraynaa la lahaa, iyadoo hadda kuwo dheeraad ahna soo galeen qaar kalena la sugayo. Midda aad shareeco u taqaanaanna sow tan ma aha oo idiin xalaalaysay inaad suuq gaysaan baddii ballaarnayd. Haddii aad shareecada ka run sheegaysaan idinka iska bilaaba oo culimadu ha idiin xukunto kolkaa baad arki lahaydeen shareecada aad dadka u sheegtaan iyo tan Alle SW ee culimadu dadka u sheegto inay labo kala yihiin.
Waxaase nasiib daro ah in khaladka intaa la’eg ee ah boobka hantida qaranka uu difaaco nin aabihii allaha u naxariistee C/rashiid Cali Sharmaarke oo ahaa nin aad u degan kolka ay dhabtu gaartana aan runta ka war wareegin. Sida ay igaga warameen qaar kamid ahaa raggii macalimiinta ka ahaan jiray kulliyaddii lafoole mar uu doonay maraykanku inay ka saaraan kulliyaddii lafoole manaahijta carabiga iyo mawaadda kale ee diiniga ah ayay waxay warqad hoosta uga direen Allaha u naxariistee C/di Rshiid Cali Sharmaarke oo xilligaa ahaa madaxwaynihii soomaliya, warqadaa oo ay uga cabanayeen fara gelinta tooska ah ee arimaha diinta ee maraykanku ku hayo kulliyadda. Kolkii ay warqaddii gaartay ayuu madaxwaynuhu intuu aad u carooday buu yiri: Goormuu maraykan diinteena wakiil inooga noqday. Kadibna hawshii halkaa bay ku dhammatay.